रोल्पा र प्रदेश नं ५ - Deshko News Deshko News रोल्पा र प्रदेश नं ५ - Deshko News
रोल्पा र प्रदेश नं ५
चुनाब आयो, भयो, सकियो । म रोल्पाको मान्छे । केहि त बोल्नै पर्यो । लेख्नै पर्यो । एक सचेत नागरिक भको हिसाबले ।
केहि वर्ष पहिले बिबिसी नेपाली सेवाको साझा सवाल नामक कार्यक्रमको एउटा एपोसोड रोल्पाको सदरमुकाममा तयार पारिएको थियो । कार्यक्रमको प्रस्तोता नारायण श्रेष्ठ र सवालको जवाफ दिनेहरुमा नेपाली कांग्रेका नेता रमेश लेखक, नेकपा एमाले नेता प्रकाश ज्वाला र माओवादी केन्द्रका नेता झक्कु सुवेदी थिए ।
त्यतिबेला एक महिलाले उठाएको – ‘अब त जंगल पहिला जस्तो छैन । पातलिएको छ । जनावरहरुलाई समेत लुक्न गाह्रो हुदैछ अचेल । तपैहरु चै कता लुक्नुहुन्छ ?’ भन्ने ब्यङ्ग्यात्मक प्रश्नमा माओवादी नेता झक्कु सुवेदीले एउटा गतिलो जवाफ दिएका थिए –‘ हामि कतै जानुर्पैन लुक्न । जनताहरु आफै खोज्दै हामि कहाँ आउछन् ।’
अब जनता कहाँ गए ? नेता कहाँ गए त ? भकुन्डो खेल्न या घाँस चर्न ? त्यो भन्छु आज ।
अँ साच्ची, त्यै कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन जिल्ला सभापति कृष्ण घर्तीले पनि एउटा बडो घत लाग्दो कुरा गरेका थिए – ‘राजधानी बसेरै गफ हान्ने नेताहरुको व्यवहारले हामिलाई जिल्लास्तरमा राजनिति गर्न गाह्रो हुन्छ । र, राजधानीकै नेताहरुलाई खबरदारी गर्ने हैसीयत राख्ने नेताहरुपनि सधै स्वाहःस्वाह भनेर बसिरहन्छन् । ’
मलाई यी केहि कुरा खुब याद आईरहेको छ । तर, चुनाब सकिएपछि आद आयो । खै किन आयो त ? केहि स्पष्ट कुराहरु गर्छु म ।
चुनाब हुनुभन्दा अघि रोल्पामा हुने गरेका विभिन्न चुनाबी गतिविधिहरु मिडियामा आईरहे । अरु अरु मोफसलका जिल्लाहरुको तुलनामा । त्यो राम्रो पनि हो ।
तपाईलाई थाहै होला, रोल्पा माओवादीको अखडा थियो र हो पनि । भोलि रहला या नरहला । त्यो भने किटान गर्न सकिन्न । त्यसैमाथि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राजनितिको रियल फेस पनि रोल्पाबाटै स्टार्ट गरेका थिए ।
अब चुनाबको कुरा गरौ । मुलतः रोल्पामा ९ वटा गाँउपाललिका र एउटा रोल्पा नगरपालिका छ । ति सबै क्षेत्रहरुमा माओवादीको राम्रो प्रभाव थियो । थियो ? मतलब चुनाब पछि प्रभाव घटेको पाईयो । भनिन्छ नी, आगोले पोलेको घाउँको दाग मेटिएपनि लामो समय सम्म रहिरहन्छ ।
चुनाब अघि कांग्रेसले ठुलै दम्भ देखायो । केहि गाउँपालिकामा आफ्नो जित सुनिश्चीत छ भन्दै । र, चुनाब प्रचार प्रसारको लागी त्यसो गर्नु स्वभाविक पनि हो, थियो ।
माओवादीले झनै दम्भ नदेखाउने कुरै भएन जितको । आखिर, दर्जनौ भन्दा वढि माओवादी उच्च अहोदाका नेता हरु जन्माएको जिल्ला पो हो – रोल्पा ।
र, एमालेले पनि आफुलाई रंगीचंगी त बनाउनु पर्यो । यद्यपि, सबै आ – आफ्नै तह तप्काले लागे चुनाबमा ।
एउटा पार्टीले अर्को पार्टीलाई कुनै ठाउँमा जितेर देखाउन पनि ‘च्यालेन्जीगं गेम’ खेले । कोहि हारे । कोहि जिते । बिकज, ईट् ईज अ गेम अफ पोलिटिक्स । कहिकतै, केहि अप्रिय घटनाहरु पनि घटे । सो स्याड त भन्नै पर्यो । तर, पनि केहि छैन । सबै सुल्झीसकेको छ ।
चुनाब बहिष्कार गरेर हुन्छ या चुनाबमा गएर हुन्छ, थवाङलाई चाहि सधै स्वाङ राख्नुपर्छ । थवाङको एउटा अपवाद खालको पुरानो ईतिहास मध्ये केहि तथ्यपनि भनिहाल्छु ।
थवाङमा कम्युनिष्ट जन्मदाको ईतिहासलाई हेर्ने हो भने वि.सं २०१२ मा कम्युनिष्टको ‘क’ भित्रिएको थियो । २०३८ सालको चुनाबमापनि रित्तो मतपेटिका फिर्ता भयो ।
२०५६ को चुनाबमा मा हेलिकप्टर मार्फत पुगेका २ जनाले मात्र मतदान गरे । २०५४ मा झनै चुनावै भएन । अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सदरमुकामबाटै घोषणा गरियो । २०५१ सालको चुनाब चाहि जसोतसो ४ मत मात्र खस्यो ।
अब अहिलेको चुनाबमा स्वतन्त्र उम्मेदवार घोषणा गरीयो । तर, के गर्नु ? माओवादीले हुन खान दिएन । अँ साच्ची, एउटा कुरा । थवाङ गाउँपालिकामा चाहि नेपाली कागें्रेस, नेकपा एमाले र स्वतन्त्रको तालमेललाई पनि सजिलै पचायो – माओवादीले ।
चुनाब जसोतसो सकियो, खुशिको कुरा । चुनाब सफल पार्नमा सहयोग पुर्याउने सम्पुर्णलाई सम्बोधन गर्नै पर्ला । नत्र, मेरो रोल्पाली संस्कार काम लाग्दैन । मैले सिकेकै यहि हो, रोल्पाबाट । र, सायद सिकाएकै पनि यहि हो कि, राम्रो लाई राम्रो भन, नराम्रो लाई नराम्रो भन ।
फाईनल्ली, चुनाब त सकियो । सबै क्षेत्रको नतिजा पनि सार्वजनिक भईसक्यो । तर, नतिजा चाहि राजधानी तिरका नेताहरुलाई अलि सक्ड हुने खालको आयो ।
त्यसबारे केहि राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुमा पनि समाचार आयो । के भयो होला नतिजा ? अफ्कोर्स, माओवादी कै हो रोल्पा ! माओवादीको ( चुनाबको बेला प्रयोग गरिएको भाषामा) लाल किल्ला हो रोल्पा ।
तर, अँहँ । अब त्यस्तो रहेन । लालकिल्ला भनेको आफनो अधिन जमाईरहनु – हुन्छ । तर, यसपटकको चुनाबमा चाहि एमाले ले आफुलाई अब्बल सावित गर्यो ।
सायद, कांग्रेसले पनि केहि प्रभाव छाड्यो । तर, जत्तिको गर्नुपर्ने हो, त्यती चाहि गर्न सक्ेन । किन गर्न सकेन त ? त्यो चाहि उनीहरु आफै जानुन ।
केहि वर्ष मात्रै भो रोल्पामा पहिलो रोल्पा नगरपालिका घोषण भएको । चुनाबमा माओवादी तर्फका उम्मेद्वार पुरण क्षेत्रीले मेयरको पद हात पारे ।
बधाई त दिनैपर्यो (पर्सनल्ली भाषामा) । अब रोल्पा कस्तो बनाउने भन्ने जिम्मा त उनकै हातमा छ । फेरी, मेयर कुर्सीमा, कुर्सी चाहि फर्सीमा स्वाह नभईदियोस ।
उनलाई सर्पोट दिनुपर्छ रोल्पाली ले । तर, उनी कसरी प्रस्तुत हुन्छन ? लेट्स सी । र बाकि ९ वटा गाउँपालिकामा ६ वटा गाउँपालिकामा माओवादीले नै जित हासिल गर्यो ।
बाँकी २ वटा गााउपालिकामा चाहि एमाले ले गतिलो मतान्तर सहित जित हात पार्यो भने कांग्रेसले जसोतसो एउटा गाउँपालिकामा आफ्नो जित हात पार्यो ।
जुन , एमालेको लागी ठुलो उपलब्धी हो । र सकारात्मक पनि । बगैचामा एउटै फुल मात्र फुलेको सुहाउदैन । थरी थरीका फुलहरु उमार्नु पर्छ । अफ्कोर्स, फाईनल्ली एमाले ले पनि उमार्यो ।
कांग्रेसले पनि उमार्न सक्थ्यो । तर, विडम्बना, माथि कृष्ण घर्तीले भने जस्तै, माथिल्लो स्तरकै दबाब र विवादले त्यसो गर्न सकेन । उसैपनि, नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार छनौटमा पनि केहि विवाद सुनियो ।
नट ब्याड । अब जे भयो त्यो त भईनै हाल्यो । चिउडोमा हात राखेर के गर्नु ? तर, पनि केहि छैन । सबैको प्रयास राम्रै हो । सो, बि पोजिटिभ ।
एट दी लास्ट, रोल्पामा माओवादीले आफ्नो अधिन कायम राख्न खोज्दा खोज्दैपनि सकेन । किन सकेन त ? उनीहरु आफै जानुन । एमालेले आफुलाई राम्रो उपलबधीमुलक बनायो र देखायो पनि ।
र, बधाई । कसरी सक्यो त यस्तो ? उनीहरु आफै जानुन । गर्दागर्दै पनि नभएको र नगरेरै नभएकोमा धेरै फरक हुन्छ । त्यसैले, कांग्रेसले गर्दागर्दै पनि किन भन्या जस्तो गर्न सकेन त ? उनीहरु आफै जानुन । तर, यो कुरा साचो हो र स्वीकार्नुपर्छ की, माओवादीको साम्रज्यमा एमालेले आफुलाई स्थापित गर्न सक्यो । भलै त्यो, कांग्रेसको प्रयासपनि उस्तै किन नरहोस ।
अब यसो हुदाहुदैपनि, माथि झक्कु सुवेदीले भन्या जस्तै, रोल्पाली जनताहरु आफै कहाँ जान्छन अब ? त्यो त हेर्नै बाकि छ ।
तर, माथिकी महिला सहभागीले भने जस्तै, आखिर अब जंगल पनि बाक्लो छैन नी, है न र ? त्यसो त, गाउँ शहर सबै बाक्लीएका छन् । सो, फस्टफल वी सुड बि चेन्च ।
अब, प्रदेश नं ५ को कुरा गरौ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहदा देशलाई स्थानीय तह पुन सरंचना गर्दा प्रदेश नं ५ अलि विवाद बन्यो । केहि विरोधका कार्यक्रम र आन्दोलन पनि भए । प्रदेश नं ५ को राजधानी कहाँ बनाउने ? भन्ने विषयमा झनै प्रदेशवासीहरु नै दोधारमा देखिए ।
कतिपयले दाङलाई प्रदेश नं ५ को राजधानीको रुपमा अघि सारे भने कतिपय बुटवल । खासमा उपयुक्त कहाँ होला ? सबैले आफ्नो बिचार राखे ।
चुनाब सम्पन्न हुनु भन्दा अघि दाङवासीले एमाले लाई एउटा आरोप लगायो । अझै यसो भनौ, एमालेको विरोधी भएर उत्रियो । किनकि, एमाले ले प्रदेश नं ५ को राजधानीमा वुटवललाई अघि सारेको थियो । तर, यकिन भने भईसकेको छैन ।
यसैपनि, दाङको मुख्य क्षेत्र घोराहीमा नेपाली कांग्रेसका खुम बहादुर खड्काको राम्रो प्रभाव रहेको क्षेत्र हो । तर, चुनाब पश्चात त्यो सबै अपेक्षा गलत ठहरीयो ।
फाईनल्ली, दाङको घोराही उपमहानगरपालिका र तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकामा एमालेका उम्मेद्वारले विजय हासिल गरे । दाङ त एमालेको विरोधमा उत्रिएका थियो । तरपनि कसरी, दाङलाई कसरी आफ्नो पकडमा ल्यायो त, एमाले ले ?
यसको श्रेय चाहि दाया वाया नगरेर शान्ता चौधरीलाई जान्छ । दिनुपर्छ । उनले, दाङमा आफ्नो राम्रो प्रभाव जमाउन सफल भईन । आई एम रियल्ली अप्रीसियट हर ।
कांग्रेस किन कमजोर बन्यो त दाङमा ? यो, चै गम्भीर कुरा हो । तर, सबैको चासो विषय भने होईन । किनकि, यसको जिम्मेवार त कांग्रेसीजनहरुले लिनुपर्छ ।
अब, यसो भनिरहदा वुटवलमा पनि एमाले ले आफ्नो जित हासिल पारिसकेको छ । फाईनल्ली, प्रदेश नं ५ को राजधानी कहाँ बन्छ ? त्यो, त एमालेको हातमा छ ।
तर, यसो भन्दैमा एमालेले पनि आफ्नै मर्जि अनुरुप जनताको ईच्छा विपरित भने प्रस्तुत हुनु हुदैन । जे गरोस, जनताको भलोको लागी गरोस । शुभकामना ।
र अन्त्यमा, चुनाब आयो, भयो, सकियो । नेकपा एमाले, नेपाली कागं्रेस र माओवादी केन्द्रका जित्ने सबै उम्मेदवारलाइृ बधाई । कार्यकाल सफल रहोस । र हार्नेलाई पनि शुभकामना ।
जनताको सेवा गर्न जित्नै पर्छ भन्नेपनि त छैन । सो, बि पोजिटिभ । यी सब केहि बितेका, केहि हुदै गरेका र केहि हुनेवाला कुराहरुको तितो समिक्षा मात्र हो ।
र, मलाई रोल्पाले सिकाएको संस्काुर पनि त यहि हो । राम्रोलाई राम्रो भन, नराम्रोलाई नराम्रो भन ।
लभ यु प्रदेश नं ५